China 330kV M-ụdị akara ụlọ elu rụpụta na Factory | XY Tower
0lọ elu akara ụdị 330kV M
Akụrụngwa nke XY Tower
Obi nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọ bụla bụ akụrụngwa ya. XY Tower nwere ikike awụnyere iji rụpụta ụlọ elu puku 30,000 kwa afọ.
XY Tower dị njikere izute ụkpụrụ kachasị mma nke ụwa.
Nhazi nke ọma, ihe eji arụ ọrụ igwe na nnukwu ụlọ ọrụ nchekwa maka igwe na-enye XY Tower ngwaahịa dị mma dịka ihe siri ike nke ndị ahịa.
A rụpụtala osisi ebe a na Chengdu na ibé mita 35,000. Ọ na-agwakọta ndị ọkachamara nwere nkà na akụrụngwa nrụpụta ọgbara ọhụrụ iji hụ ngwaahịa kachasị mma.
Wuru na ala ozo di 7000 sq. Maka osisi galvanized.
Ọ na-etinye teknụzụ kachasị ọhụrụ maka ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke ọtụtụ akụkụ.
Nkọwa ụlọ elu
nnyefe ụlọ elu bụ a ogologo Ọdịdị, na-emekarị a ígwè lattice ụlọ elu, iji na-akwado ihe efefe ike akara. Anyị na-enye ngwaahịa ndị a site na enyemaka nke
arụsi ọrụ ike na-enwe nnukwu ahụmịhe na ngalaba a. Anyị na-agafe nyocha nyocha zuru ezu, eserese ụzọ, ntụpọ nke ụlọ elu, usoro eserese na akwụkwọ usoro mgbe ị na-enye ngwaahịa ndị a.
Anyị ngwaahịa na-ekpuchi 11kV ka 500kV mgbe na-agụnye dị iche iche ụlọ elu ụdị atụ nkwusioru ụlọ elu, nje elu, n'akuku ụlọ elu, ọgwụgwụ ụlọ elu wdg
Tụkwasị na nke a, anyị ka nwere ụdị ụlọ elu dị elu na ọrụ imepụta a ga-enye ma ọ bụrụ na ndị ahịa enweghị ihe osise.
Aha ngwaahịa Nzipu akara ụlọ elu
Akara XY owlọ
Volta ọkwa 220 / 330kV
Elu ọnụ 18-48m
Ọnụ ọgụgụ nke onye nduzi na-eduzi 1-6
Ọsọ ikuku 120km / awa
Ndụ Ihe karịrị afọ 30
Standardkpụrụ mmepụta GB / T2694-2018 ma ọ bụ onye ahịa chọrọ
Akụrụngwa Q255B / Q355B / Q420B / Q460B
Materialkpụrụ ihe onwunwe GB / T700-2006, ISO630-1995; GB / T1591-2018 ； GB / T706-2016 ma ọ bụ Achọrọ Ndị Ahịa
Ọkpụrụkpụ mmụọ ozi ígwè L40 * 40 * 3-L250 * 250 * 25; Efere 5mm-80mm
Usoro Mmepụta Nnwale ihe onwunwe, Mbelata, Nkedo ma ọ bụ ekwe → Nyocha nke akụkụ → Flange / Parts ịgbado ọkụ → mmezi → Hot kpaliri → Recalibration → Nchịkọta → Mbupu
Ịgbado ọkụ ọkọlọtọ AWS D1.1
Ọgwụgwọ ihu Hot itinye kpaliri
Vanikpụrụ galvanized ISO1461 ASTM A123
Ngwunye GB / T5782-2000; ISO4014-1999 ma ọ bụ Achọrọ Ahịa
Bolt arụmọrụ fim 4,8 ； 6,8 ； 8,8
Akụkụ mapụtara A ga-enyefe 5% bolts
Akwụkwọ ISO9001: 2015
Ike 30,000 tọn / afọ
Oge na ọdụ ụgbọ mmiri Shanghai 5-7 ụbọchị
Oge Mbuga ozi Ọ na-abụkarị n'ime ụbọchị iri abụọ dabere na ọnụọgụ dị ukwuu
ibu na ibu ibu 1%
opekempe iji buru ibu 1 setịpụrụ
1, Ọrụ nnabata ndị ahịa. Obi dị anyị ezigbo ụtọ na ndị ahịa anyị na-eleta XY Tower. Anyị ga-achọ ịnye mmadụ 2-3 ebe obibi ụbọchị atọ na enyemaka ndị ọzọ dị mkpa maka ndị ahịa anyị n'efu.
2, Trial nzukọ ụlọ elu ọrụ. Dị ka ogologo dị ka ndị ahịa chọrọ ikpe nzukọ ụlọ elu ọrụ, ihe ọ bụla ahịa na-abịa ụlọ ọrụ ma ọ bụ, anyị ga-eme ikpe nzukọ ụlọ elu na-a video maka ọdịnihu akwụkwọ.
3 service Ọrụ mmelite kwa ụbọchị ： Ozugbo a bịanyere aka na nkwekọrịta ahụ, otu ọrụ ga-agụnye onye sitere na ngalaba mmepụta ahịa 、 QC 、. Ndị otu a raara onwe ha nye ga-enye akụkọ kwa ụbọchị site na mkparịta ụka otu nke WhatsApp ma ọ bụ WeChat ma zaa ajụjụ ọ bụla ndị ahịa na-eme n'oge, yabụ ndị ahịa ahụ nwere ike ịdebe ọnọdụ mmepụta.
4、5% karịa bolts & mkpụrụ ga-enye n'efu iji hụ na echichi.
5, Ewezuga ngwaahịa, XY Tower ga-enye asambodo na akụkọ ndị a
.Raw Ihe Report si ígwè na nkume igwe nri
.XY Tower Raw Material nyochagharị akụkọ
.Tower akụkụ nnyocha ndia si QC otu
.XY Tower Ruru Eru ngwaahịa na-ekwe ka ex-factory akwụkwọ
.XY Tower Ruru Eru kpaliri akwụkwọ
.Certifate nke Si Malite
Ogo nke Hot-itinye galvanizing bụ otu n'ime ike anyị, Onye isi oche anyị Mr. Lee bụ ọkachamara n'ọhịa a na aha ọma na Western-China. Ndị otu anyị nwere ahụmịhe dị ukwuu na usoro HDG ma ọ kachasị nke ọma na ijikwa ụlọ elu dị na mpaghara nnuku dị elu.
Galvanized ọkọlọtọ: ISO: 1461-2002.
Ọkpụrụkpụ nke mkpuchi zinc
Ike nke nrapado
Corrosion nke CuSo4
Standard na chọrọ
A gaghị ewepụ uwe zinc ma hazie ya
Free prototype tower nzukọ ọrụ
prototype ụlọ elu nzukọ bụ a nnọọ omenala ma irè ụzọ inyocha ma zuru ezu ịbịaru ziri ezi.
N'ọnọdụ ụfọdụ, ndị ahịa ka na-achọ ịme mgbakọ ụlọ elu prototype iji hụ na eserese zuru ezu na ịgha ụgha dị mma. N'ihi ya, anyị ka na-enye prototype ụlọ elu nzukọ ọrụ maka free ahịa.
N'ime ọrụ mgbakọ ụlọ elu, XY Tower na-eme nkwa ：
• Maka onye otu ọ bụla, a ga-enyocha ogologo, ọnọdụ nke oghere na mmekọrịta ya na ndị ọzọ so n'ụzọ ziri ezi maka ahụike kwesịrị ekwesị;
• Ọnụ ọgụgụ nke onye ọ bụla so na bolts ga-eji nlezianya nyochaa site na ụgwọ nke ihe mgbe ị na-achịkọta prototype;
• Drawings na ụgwọ nke ihe, nha nke bolts, fillers wdg a ga-adi ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla ndudue na-ahụ.
Ọrụ nleta ndị ahịa
Anyị nwere obi ụtọ na ndị ahịa anyị ileta ụlọ ọrụ anyị ma lelee ngwaahịa a. Ọ bụ ohere dị ukwuu maka n'akụkụ abụọ ịmara ibe ha nke ọma ma wusie ike maka ndị ahịa anyị, anyị ga-anabata gị n'ọdụ ụgbọ elu ma nye ụbọchị 2-3 ebe obibi.
A na-echekwa ngwaahịa anyị niile dị ka ihe osise zuru ezu. A ga-etinye koodu ọ bụla akara nchara na ibe ọ bụla. Dabere na koodu ahụ, ndị ahịa ga-amata n'ụzọ doro anya otu mpempe nke ụdị na ngalaba.
A na-agụzi akụkụ niile ọnụ ma jikọta ya na eserese nke nwere ike ikwe nkwa na otu mpempe adịghị efu ma dị mfe itinye.
Nọmalị, ngwaahịa ga-adị njikere na 20 na-arụ ọrụ ụbọchị mgbe nkwụnye ego. Mgbe ahụ ngwaahịa ga-ewe 5-7-arụ ọrụ ụbọchị na-abata na Shanghai Port.
Maka mba ụfọdụ ma ọ bụ mpaghara ụfọdụ, dị ka Central Asia, Myanmar, Vietnam wdg, ụgbọ oloko ụgbọ njem China na Europe na ụgbọ ala nwere ike ịbụ ụzọ abụọ ka mma maka njem.
Nke gara aga: 330kV okpukpu abụọ akaghị nnyefe ụlọ elu
Osote: 132kV okpukpu abụọ cirrcuit
Tower Line Tower
Ntanye Line Tower